In seenyada maanta, telefoonada ka sii tiro oo u dhaw in ay bedelay kombiyuutarada naga wadajir helo. The technology iyo meel laga heli karo noo maalmahan sidoo kale gebi ahaanba waa la dhaliiley. Si kastaba ha ahaatee, mobile ah, inkastoo iyagoo anfacaya yaboohaya faa'iido aad u weyn, waxa ay halis waqti isku mid ah; waxaa laga yaabaa in aad la xado ama waxyeelo. Xaaladaha noocaas ah, macluumaadka oo dhan iyo farriimo muhiim ah qoraalka laga yaabaa in laga badiyay.
Sidaas, si looga hortago dhacdooyinka nasiib darro sida, mid loo baahan yahay in nidaamka xogta oo dhan ay si ay ammaanka iyo dhawrsan oo ah qaab gurmad ah. In this article, waxaan la faahfaahsan uga doodi doona sida aad u hagaagsan karaan farriimaha qoraalka ah ee aad la bartilmaameed kala duwan oo siyaabo kala duwan.
Text Message nidaameed Android la Exchange
Nidaameed Text Messages From Android Si Alwaaxdii
Nidaameed iPhone fariimaha qoraalka Iyadoo Lugood / iCloud
Nidaameed fariimaha qoraalka Si Computer Wixii kaabta
Si aad u hagaagsan aad fariimaha deg dega ah (SMS) si xisaab email ee Microsoft Exchange, raac tallaabooyinka fudud ee hoose ku siiyo.
Talaabada 1: From screen Home qalab Android aad ka, riix doorasho Menu, oo markaas waa inay Settings.
Talaabada 2: Hadda, dooranayaan ee 'Xisaabaadka iyo nidaameed' ka screen Settings ah.
Talaabada 3: On shaashadda soo socda, ka dhacay doorasho ee account Add.
Talaabada 4: Marka screen dambe ka furmay la fursadaha uu ka soo xusho, dooro Microsoft Exchange ActiveSync.
Talaabada 5: Shaashadda xigta waxay doonayaan in aad galaan dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in si ka sameysataa xisaab u gaar ah, mar samayn, kaliya riix Next.
Talaabada 6: From shaashadda soo socda, si loo hubiyo in aad loo doortay doorasho ee nidaameed SMS, kadibna riix batanka 'Next', iyo in ay tahay, aad si guul leh synced fariimaha qoraalka aad Android la Exchange hadda!
Telefoonka waa in dhammaan dadka badankiisu u baahan tahay inaad soo dirto oo aad hesho fariimaha deg dega ah, laakiin marka aad u hagaagsan aad mailkooda in aad kaniini Android, awooddo in aad si dhab ah u saxiixay aad SMS iyo fariimaha multimedia more effortlessly. Ma aha inay iska ilaawaan, waxa kale oo aad ka heli screen ka weyn oo ka rada weyn u fariimaha. Halkan hab si aad u hesho fariimaha deg dega ah looxa ah.
Tallaabada 1: Soo hel MightyText on Google Play Store oo ku xidh. Buuxi Mudanayaasha adigoo raacaya tilmaamaha si fiican u dhigay in app wuxuu la iman doonaa.
Talaabada 2: Xusuusnow in MightyText si toos ah ogaadaa xisaabtaada firfircoon Google on qalab aad. Waxaad kaloo dooran kartaa inaad u tagto iyaga wata cinwaan cusub ay dhacdo in aad rabto in aad. Marka sameeyo, si fudud ku dhufatey badhanka 'Setup Buuxi' ka dibna, badhanka 'OK'.
Talaabada 3: Hadda, waa wakhti aad ku rakibi 'SMS Text Fariin - Tablet SMS' in aad kaniini Android; waa inaad awoodaa inuu ku helo software si fudud on Google Play Store noqon.
Talaabada 4: Isticmaal account la mid ah in aad loo isticmaalo si ay u gasho ee aad taleefan ka hor. Marka jeeg sababo la sameeyo, waxaad arki doontaa in aad kaniini si toos ah oo lala xiriirinayo in ay qalab Android aad.
Talaabada 5: Hadda waxaad ka heli doontaa shaashad la mid ah mid ku qoran shaashada ee kor ku xusan, mar kasta oo aad ku abuurtaan codsiga in uu yahay. Bidix kooxda gacanta screen on software cajiibka ah, uu helo guddi ee wada hadallada oo dhan ee aad la isticmaalaya telefoonka. Waxaad arki doontaa in fariimaha qoraalka ah oo dhan ayaa laga synced aad kaniini oo aad hadda si fudud u heli karaan dhammaan oo ka mid ah ka kiniin ah adiga oo isticmaalaya shaashadda weyn iyo manouvering fiican dabcan.
Talaabada 1: Ka bilow bilaabay Lugood dibna xiriiriyaan iPhone iyo PC isticmaalaya cable USB ah.
Talaabada 2aad: Sida ugu dhakhsaha badan taleefanku xiran yahay oo loo aqoonsaday, waa in aad ikhtiyaarka ah in ay doorasho ka geeska kore ee midigta ee suuqa kala Lugood.
Talaabada 3: Isla marka aad guji iPhone, waxaad la qaadi doonaa si screen kale oo ku siinayaa macluumaad badan oo ku saabsan qalabka. Waxa kale oo aad ka arki doonaa qaybta gurmad ah oo ku saabsan suuqa kala isku mid. Hadda, in la sameeyo gurmad ah dhamaystiran oo aad qalab, kaliya dooro ikhtiyaarka ah ee 'computer Tani', oo waa in aad ka helo dhinaca bidix ee shaashadda this.
Talaabada 4: Haddii aad rabto in aad gurmad waa in la badbaadiyo oo la lakabka ah oo dheeraad ah oo sirta, waxaad kaloo dooran kartaa xulasho ee 'sir iPhone gurmad' oo, sida ay sheegay in si cad, sir doonaa gurmad iPhone halka syncing aad SMS iyo faylasha kale.
Talaabada 5: Marka sameeyo, guji "Back Up Hadda 'si loo bilaabo nidaamka. Xusuusnow in aad guji ah gujisid dhowr doorasho ku haboon sida ha loo hubiyo in aad guji "Back Up Apps 'in ay sii barnaamijyadooda aad rabto iwm Lugood hadda bilaabi doona wareejinta faylasha gurmad, barnaamijyadooda iyo macluumaad kale oo si Lugood ah maktabad aad iPhone. Marka habkan la dhamaystiro, si fudud ku dhufatey 'qabtay' button ka geeska gacanta midigta sare ee shaashadda.
Talaabada 6: haatan Waa in aad farriin ah in Xaqiijiyay dhamaystirka geeddi-socodka, iyadoo farriimo aad qoraalka iyo macluumaad kale oo synced ama xoojiyaa.
Tallaabo 7: Haddii aad rabto in aad aragto fariimaha synced, aad si fudud u leeyihiin in la abuuro gurmad ah oo ka mid ah aad kombuutarka sida iCloud ma ogola taasi. Marka aad la abuuro gurmad ku PC, waxaad samayn kartaa isticmaalka barnaamijyadooda sida iExplorer ah oo ay awoodaan si ay u arkaan fariimaha qoraalka ah oo aad si fudud.
Tallaabo 8: Dooro ikhtiyaarka iPhone ku qoran shaashada PC, gacanta bidix bar kooxda, ka dibna ku dhufatey 'Data'> 'Messages'. Waa in aad arki karin fariimaha la xoojiyaa shaashadda hadda noqon.
Talaabada 1: Ka bilow ku xira iPhone aad WiFi.
Talaabada 2: Haddaba tag in screen Home ku saabsan iPhone oo ka jaftaa ku app 'Settings ". Ka dib markii in, la doorto ikhtiyaarka iCloud.
Talaabada 3: Dooro tab ah 'Dib ugu & kaydinta iyo beddelaan ku saabsan' gurmad iCloud 'doorasho. Soo gal la ID Apple iyo password aad ee shaashadda soo socda.
Talaabada 4: Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu dambeeya ee la sameeyo waa in ay doortaan 'hadda dib' doorasho si gurmad fariimaha qoraalka ah in aad xisaabta iCloud ah.
Talaabada 5: • Galitaanka fariimaha qoraalka ah oo dhan ku iCloud waa quruxsan fudud, si fudud u beddelaan aad iCloud, oo aad marin u ikhtiyaar fariin ka galeeysid gacanta bidix. Haddii aad iPhone waa calaamad cusub, waxa laga yaabaa inaad u sameeyaan hagaajin qaar ka mid ah inay goobaha si ay u awoodaan in ay arkaan fariimaha xoojiyaa. Tag Settings> General> celi, ka dibna dooro ikhtiyaarka ah ee 'masixi All Content iyo Settings ". Hadda, geli ID cusub iPhone Apple iyo password. Your iPhone waa in ay diyaar u hayaan iCloud ka dib samaynta faahfaahin login noqon.
Waxaa jira barnaamijyadooda badan oo laga heli karo suuqa, kaasi oo caawinaya in aad dib oo dhan aad fariimaha gaarka ah si aad u computer kaydinta ammaan ah. Laakiin ugu dhexdooda oo dhan oo iyaga ka mid hufan waa Wondershare MobileTrans . Tani software cajiib yimaado labada Mac iyo Windows. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad gurmad fariimaha qoraalka ah oo dhan, MMSs, iMessages leh ku lifaaqan iwm, si aad u computer, iyo in sidoo kale iyadoo la kaashanayo kaliya click fudud. Waxaa kaloo lagu siin fursad aad ku soo celinta qalabka iPhone ama Android markasta oo aad rabto.
Tallaabooyinka ku lug leh kiiska qalabka macruufka iyo Android badan yihiin ama ka yar la mid ah oo waa sida hoos ku qoran.
Talaabada 1: First of dhan, xiriiriyaan qalab iPhone ama Android inay your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB kala. Hadda, ordo MobileTrans aad Mac ama Windows PC. Qalab Your waa in isla markiiba la ogaado by MobileTrans iyo waa in ay muujiyaan shaashadda sida hoos ku siiyo.
Talaabada 2: Dooro ikhtiyaarka ah 'dib Your Phone' si ay u helaan habka gurmad ah. On shaashadda soo socda, ka fursadaha wax la siin xarunta ee shaashadda, 'fariimaha Text "la xusho. Hadda, ku dhufatey button Start Copy laga bilaabi karo habka iyo in ay tahay. Waa inaad waqti ka mid ah la siiyo geeddi-socodka oo gurmad ay u noqdo, si dib si fudud u fadhiisan, nastaan, oo ha MobileTrans shaqada si toos ah.
> Resource > Talooyin > 4 Siyaabaha u hagaagsan SMS la Bartilmaameedyada kala duwan